A Ndapu Aka Na-arụ Ọrụ? | Martech Zone
A Ndapu Aka Na-arụ Ọrụ?
Na Tọzdee, Septemba 13, 2011 Saturday, July 8, 2017 Douglas Karr
Mgbe anyị weghachiri akwụkwọ akụkọ anyị, Achọrọ m ịme ka njikọ ntinye aha bụrụ ihe kachasị na saịtị anyị. Anyị gbakwunyere ngalaba ọdịda n'elu saịtị ahụ ma ọ dị ịtụnanya. Ezie na anyị na-emebu otu otu ma ọ bụ abụọ ndị debanyere aha mbụ, ugbu a anyị na-enweta ọtụtụ ndị debanyere aha kwa izu. Akwụkwọ akụkọ Technology Technology na-eto eto nke ukwuu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị debanyere aha 3,000!
Ọ ga-amasị m ịtinye ndọtị ole na ole ọzọ n'ebe ahụ - ikekwe Facebook, Twitter, Video, Podcast, na taabụ ọchụchọ. Ọ bụ nnukwu ụzọ iji gosipụta ọdịnaya na-enweghị mkpa onye ọrụ iji gaa na ibe ọhụụ. Ọzọkwa, akara ukwu ọ na-ewere dị obere karịa ụdị ndenye aha na sidebar na-ewere!
E nyere usoro okpomoku ahụ site na Mee ka ume dị ọhụrụ. A sị na ọ bụghị maka okpomoku ahụ, echeghị m na m gaara amata mmadụ ole na ole pịa ebe ahụ! Ugbu a ọ bụ oge iji mee ka ozi dị ike n'ebe ahụ iji mee ka ha chọọ ịdenye aha.
Tags: okpomokuikpo ọkụnwughari
Ebumnuche Azụmaahịa Ike